Umkhiqizi we-Metal Weam Nationalplates A alice
Uzibophezele ekuklameni nasekukhiqizeni ama-Metal NamePlates wensimbi kusukela ngo-1998
Ilebula Yensimbi Engagqwali
I-Zinc Alloy Nameplate
Ilebula yebhodlela lensimbi
Ilebula ye-nickel ye-electroforder
Amabheji we-Metal - Imikhiqizo Yakho Brand Ambassador
Umkhiqizo oyinhloko ka-Alice unalo lonke uhlobo lwebhodi yesiginali eyenziwe ngensimbi engenasici, titanium, ithusi ku-aluminium nokunye. Ukumboza i-etching, ukucindezela kokuphonsa, i-oxidizing, polishing, i-rubberung in inqubo njll.
Gxila kwifenisha kanye nensimu ye-elektroniki ye-elekthronikhi.
Khipha ku-internet Quality Unxande Aluminium Ilebula Factory
I-Profectxangle i-Aluminium Laben Laben Browruct, imininingwane mayelana nelebuli ye-reccAngle aluminium.Iminyaka engama-21 yesipiliyoni sokukhiqiza se-Metal Sign, kusuka ekukhiqizweni kwentengiso ukuthuthukiswa komkhiqizo ekubumbeni komkhiqizo, zonke izixhumanisi ziyamangaza futhi zilwele ukuphelela kwaphesheya kwezilwandle, zilawule wonke amathuluzi okusebenza, futhi alwele ukudala ikhwalithi ephelele kunazo zonke.
I-CD ehamba phambili ye-CD Lines Aluminium Badge Proferier-Alice Favort
Ufuna umphakeli we-Aluminium Badge oyindilinga? Imininingwane mayelana ne-Aluminium Badge eyindilinga.Thina (Alice) singumbhali wezezifiso zeminyaka engama-21. Sinabasebenzi abangaphezu kwe-100, isizinda sokukhiqiza samamitha-skwele angama-1500, bese siqhubeka nokwethula imishini yokukhiqiza yanamuhla yesimanje. Ukuze uhlangabezane nezidingo zomncintiswano wemakethe futhi ulandele umkhuba wezomnotho, eminyakeni yamuva nje, sithuthukise ngokuqhubekayo ibhizinisi lasekhaya nakwamanye amazwe e-E-Commerce Trade Business, sithuthuka njalo.
Best China Best Aluminium Badge Bluelers-Alice Factory Price - Alice
Ukukhiqizwa kwe-Alluminum Badge, imininingwane mayelana ne-Aluminium Badge enhle kakhulu.I-Alice Best China Best China Aluminium Badge Akhiqizi-Alice, ifektri yakho kanye nabasebenzi abangaphezu kwe-100, izindleko zingaphansi kwemboni efanayo 2% enekhwalithi efanayo.Thina (Alice) ngumenzi ochwepheshe wamagama efenisha, singakhiqiza i-aloy ye-zinc, i-aluminium, ithusi, i-PVC, njll. Kusetshenziswa izibonakaliso zensimbi, nokuxhasa konke ukuvakasha.
Amalebula we-Aluminium Alloy asetshenziswa kabanzi ku-Daily Life-China Aluminium Badge Akhiqizi-Alice
Ufuna ibheji le-aluminium? Imininingwane mayelana ne-Red Aluminium BadgeIbheji liyingxenye ebaluleke kakhulu yanoma yimuphi umkhiqizo wokuhlonza isithombe kanye namandla akhiqizwayo womenzi.I-alloy esekelwe ku-aluminium enenani elithile lezinye izinto ezenziwayo kungenye yezinto zensimbi ezikhanyayo.
Kungani Chosse Alice?
U-Alice uhlanganisa amamitha-skwele angama-2000 futhi kunezinto ezingaphezu kuka-50 ezisebenza lapha lapho kufaka phakathi wonke umnyango: qc, design, umkhiqizo, Iqembu lethu le-Professional izokwakha ikhwalithi ephezuluAma-Metal Naneplates kwakho.
Kuze kube manje, u-Alice usuvele ubambe amalungelo obunikazi ayi-5, futhi unenkonzo yezidingo ngazinye. Iphinde yakha iqhinga lesikhathi eside lezinkampani ezidumile, isibonelo se-FOX: I-Huawei, i-Apple Apple njll.
Ithimba Lokuholwa Emabhizinisi Olungcweti, Onobuhlakani + Wokuthuthukiswa Kwezimboni
Kubalulekile kunoma yimuphi usonkontileka angadluli kwisabelomali nokuthi kungani sinaka kakhulu.
Wonke amaphrojekthi esisebenza kuwo ahlolwe ukuqinisekiswa kwekhwalithi ukwanelisa izidingo zomphakathi wanamuhla.
Iqembu lethu lobuchwepheshe lingafaka zonke izinhlobo zemishini esakhiweni esiqediwe njengengxenye yezinsizakalo zokwakha zangemva.
U-Alice unikezele kumkhiqizo oqondile kusukela kwasungulwa ngonyaka we-1998, ikakhulukazi agxile kwifenisha kanye ne-elektroniki insimu yensimu njengokuthambekela.
Umkhiqizo omkhulu ka-Alice unazo zonke izinhloboAma-Metal Naneplates Kwenziwe ngensimbi engenasici, titanium, ithusi ku-aluminium nokunye. Ukumboza ukuhlanganisa, ukucindezela kokuphonsa, i-oxidishing, i-polishing, i-rubbering enqubweni njll.
"Ikhwalithi ephezulu kakhulu, isebenza kahle" ithathwa njengombono wethu othuthukisiwe.
Ufuna lapho amalebula ensimbi asefenifeni- a Alimace
Umkhiqizo oyinhloko ka-Alice unalo lonke uhlobo lwebhodi yesiginali eyenziwe ngensimbi engenasici, titanium, ithusi ku-aluminium nokunye. Ukumboza ukuhlanganisa, ukucindezela kokuphonsa, i-oxidishing, i-rubbering enqubweni njllAmalebula wensimbi yefenisha njalo njalo.
Ukucutshungulwa okwenziwe ngokwezifiso kwezimpawu zensimbi, inqubo yokukhiqiza yesitembu yezimpawu-alice fektri
Umgomo womshini wokunyathela ukushayela i-flywheel ngemoto, futhi nge-clutch kanye negiya lokuhambisa ukushayela umshini we-crank kanye nokuxhuma umshini wokuhambisa isilayidi ukuhambisa islayidi phezulu naphansi, nokushayela umdwebo ufe ukuze wakhe ipuleti lensimbi. Ukubizwa okubizwa ngokuthi okuphindwe kabili kusho ukuthi umshini wokushicilela unama-slider amabili, ahlukaniswe isilayida sangaphakathi nesilayida sangaphandle. Isilayidi sangaphakathi sishayela i-punch noma sifa ngesikhunta, futhi isilayidi sangaphandle sishayela indandatho engenalutho ku-isikhunta. Ngasikhathi sinye, umnikazi ongenalutho uhamba kuqala ukucindezela onqenqemeni lwepuleti yensimbi, bese kuthi isilayidi sangaphakathi sihamba selule. Eqinisweni, lokho esikubiza ngokuthi umshini wokubhoboza igama elijwayelekile, yilokho esivame ukusibiza ngomshini wokubhoboza. Igama lesayensi kufanele libizwe nge-Press.
Lawula ngokuqinile ikhwalithi yenqubo yenqubo yensimbi ye-Metal Sign Consion kanye nokupholisa-i-Alice Factory
I-Hydraulic Press (Uhlobo lwe-Hydraulic Press) isebenzisa uwoyela okhethekile we-hydraulic njenge-med ephakathi nendawo kanye nephampu ye-hydraulic njengomthombo wamandla. Amafutha e-hydraulic angena kwisilinda / i-piston ngepayipi le-hydraulic ngamandla wepompo, bese kuthi amangaki ku-cylinder / piston isethi yezimpawu ezifanisiwe, kodwa zonke izikhala ezihlukile zihlukile, kepha zonke zidlala indima ye Ukubekwa uphawu uphawu, ukuze uwoyela we-hydraulic awukwazi ukuvuza. Ekugcineni, nge-valve yendlela eyodwa, uwoyela we-hydraulic usakazwa ethangini lamafutha ukwenza umjikelezo we-cylinder / piston ukwenza umsebenzi wokuqedela isenzo esithile somshini njengohlobo lwemishini yokukhiqiza.
I-Wholesale A Preferali Fembutha Ilebishi yelebula - i-Alice enentengo enhle - u-Alice
Umkhiqizi wefenisha ochwepheshe-aliceThina (Alice) ngumenzi ochwepheshe wamagama wefenisha, singakhiqiza i-zinc alloy, i-aluminium, ithusi, ithusi, i-PVC, njll. Kusetshenziswa izibonakaliso zensimbi, nokusekela konke ukuhamba kwempilo. Izimpawu ezikhiqizwa zilula futhi zisebenza, zinhle futhi zinomusa, ngemininingwane ebabazekayo, umsebenzi obushelelezi, kanye nomqondo oqinile wezinhlangothi ezintathu. Kuyinto evamile yokuphatha indawoI-Alice Wholesale Ilebhu yefenisha yefenisha yefenisha u-Alice ngentengo enhle - i-Alice, ifektri yakho kanye nabasebenzi abangaphezu kwe-100, izindleko zingaphansi kwemboni efanayo.
Uma uneminye imibuzo, sibhalele!